काजु खेति कसरी गर्ने ? सम्पुर्ण जानकारी सहित « Bagmati Online
काजु खेति कसरी गर्ने ? सम्पुर्ण जानकारी सहित
काजु खेती प्रबिधि : काजु एक स्वादिष्ट र उपयोगी फल हो । यसको खाने भाग दाना (कर्नेल नट) स्याउजस्तो देखिने केसु एपलको तल्लो भागमा लाग्छ । काजु दानाको बाहिरी खोल कडा हुन्छ । काजुको दानालाई प्रशोधन गरि खानको निमित्त प्रयोगमा ल्याइन्छ । यसमा २१ प्रतिशत प्रोटिन र ४७ प्रतिशत चिल्लो पदार्थ पाइन्छ । यसको उत्पत्ति ब्राजिलमा भएको मानिएको छ ।
हावापानी : यो उष्ण प्रदेशिय फल हो । समुन्द्र सतह देखी १००० मिटरको उचाइसम्ममा पनि काजु फलाउन सकिन्छ । यसको लामो अबधिसम्म बढी गर्मी वा ज्यादा ठन्डि सहन सक्तैन । गर्मीमा अधिकतम तापक्रम ३७ड्ढसे भन्दा बढी र जाडोमा न्युनतम तापक्रम १५डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा कम हुने क्षेत्र काजु खेतीको लागि उपयुक्त हुदैन । वार्षिक वर्षा १५०० देखि २५०० मिमि र आद्रता ७० -८० प्रतिशत काजुको निम्ति उपयुक्त मानिन्छ ।
माटो :काजु खेतीको लागि दुमट वा बलौटे दुमट पिएच ६-७ भएको माटो उत्तम मानिन्छ । पानी निकासको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ ।
जात : केसु एपलको रङको आधारमा (रातो,पहेलो,गुलाबी) र आकारको आधारमा (गोलो,लाम्चो) किसिम छुट्याइन्छ । भारतमा लगाइएको जातहरु बिपिपी , भेङुर्ला, भि आर आई , उल्लास सेरिजमा छ्न ।
बिरुवा उत्पादन : बिरुवा उत्पादन धेरैजसो बिउद्वारा नै गरिन्छ । इपिकोटाइल , सफ्ट उड र भेनियर ग्राफ्टिङ तरिका बाट पनि बिरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ । गुटी तरिका पनि कहिकहि चलनमा छ ।
बिरुवा लगाउने कार्य : ३-४ पटक खनजोत गरि तयार पारेको जमिनमा ७-८ मिटरको दुरी राखी वर्गाकार वा त्रिकोण तरिकाबाट रेखाङ्कन गर्नुपर्छ । आधा मिटर गहिरो र त्यतिकै चौडा खाडल खनी माथिल्लो सतहको माटोमा एक डोको सडेको गोबरमल र ५० ग्राम अल्डृन मिलाइ खाडल पुर्नुपर्छ ।
फुल र फल लाग्ने क्रम : काजु साधरणतया ३ देखि ५ वर्षसम्ममा फुल्न र फल्न थाल्दछ । फुलहरु हागाको टुप्पोमा लाग्दछ्न । भालेपोथी भाग भएका फुलहरु २०-२२ प्रतिशत हुन्छन तर फल ४-५ प्रतिशतमा मात्र लाग्छ । फुल बिहान ७ देखि दिउसो ३ बजेसम्म फुल्छ । बास्नादार फुल फुल्ने हुदा माहुरी र अन्य किरा आकर्षित भैई परागसेचनमा मद्दत पुर्याउछ्न । फल झर्ने समस्या समाधानको लागि हर्मोन एन .ए.ए २, ४- डि (१० पि.पि.एम) छर्न सकिन्छ।
बढ्यो दूधको मूल्य, प्रतिलिटर ५६.०४ रुपैयाँ कायम
दूधको मूल्य ह्वात्तै बढाउने तयारी, कति पुग्ला ?